Tropico dia iray amin'ireo tonga indrindra amin'ny taona amin'ny Android | Androidsis
Tropico dia iray amin'ireo franchise fanta-daza fanta-daza amin'ny PC. Ankehitriny dia manana izany amin'ny Android ho an'ny ankafizintsika isika ho toy ny lalao premium izay mahatratra 12,99 euro. Raha ny lojika dia tsy hahita micropayment amin'izany vola be izany ianao.
Rehefa tsy zatra mandoa vola be loatra amin'ny lalao iray isika, ireo mpankafy an'ity simulator izay angatahina ho mpitarika ny nosy Karaiba ity dia azo antoka fa hianjera amin'ny nosin'izy ireo mba hankafizany toa ny nataony tamin'ny PC-ny. Ary ambonin'izany rehetra izany tonga optimisé tanteraka ho an'ny Android.
1 Tropico toy ny amin'ny PC ihany
2 Azonao atao ve ny mpitondra fahitana any Tropico?
3 Lalao premium an'ny tsara indrindra
Tropico toy ny amin'ny PC ihany
Tropico afaka nitondra anay alohan'ny niainana ny fitantanana nosy sy ny maha mpitarika, miaraka amin'ireo zavatra ratsy sy mahasoa ao aminy, mponina iray izay mampifaly antsika. Amin'ny maha mpitondra vao voafidy anao dia tsy maintsy mahay mitrandraka ny harenan'ny nosy ianao ary mahita ny fahafaha-manaony lehibe hampisondrotra ny firenenao alohan'ny hafa.
Lalao izay ahitàna ny sarintany amin'ny 3D ary isika dia amin'ny tanàna Simba Karaiba, na dia misy aza ny tsy fitovizany, satria Tropico dia traikefa miavaka ao aminy. Hanana izany rehetra izany ianao amin'ny fananganana tanàna, na dia manana endrika politika tonga lafatra aza hihomehezana anay sy hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoaka mikomy amin'ny baikontsika.
Hahafahanao mamolavola sy mitantana ny fanamboarana roa, toy ny làlana sy tranobe, ary koa ireo lafin-javatra mifandraika kokoa amin'ny mponina. Ny tiako holazaina dia miresaka izay azonao atao izahay baikon'ny fampiharana amin'ny politika ara-tafika sy ara-barotra sy ivelany; raha ny marina dia hitantsika ny fitoviana sasany amin'ireo lalao tsara indrindra navoaka tamin'ity taona ity: Rebel Inc..
Azonao atao ve ny mpitondra fahitana any Tropico?
Anjaranao ny mampiasa ireo loharano tsy voatanisa ireo raha hiova mankany amin'ny firenenao amin'ny paradisa fizahan-tany miaraka amin'ny ho avy lehibe, firenena matanjaka indostrialy hatahotra an'i Russia na fanjakana polisy fotsiny izay atahorana ny tahotra isaky ny olom-pirenen'ny nosy Karaiba anao.
Raha miresaka politika izahay dia miresaka momba anao koa Ho tompon'andraikitra amin'ny fanisaman'ny fifidianana ny tenanao ianao, atsaharo ireo singa mpamadika izay te-hanary anao tsy hanana fahefana na hifehezana ny saim-bahoaka; tsy hafahafa mihitsy amin'izao andro izao. Ary mazava ho azy, ireo izay manaraka anao dia afaka manome valisoa azy ireo hisaotra azy ireo amin'ny fahaizany manao ny baolina ho anao sy miasa eo anilanao.
Tropico dia natao ho an'ny Android ho seranan-tsambo vita avy hatrany. amin'ny interface interface intuitive azonao atao ny milalao modely ny PC traikefa. Mazava ho azy, amin'ny fanombohana, hita ny bibikely sy ny tsy fahampian'ny fampisehoana, ka hiandry fanavaozam-baovao vitsivitsy izahay mba hanombohany tsara.
Lalao premium an'ny tsara indrindra
Miaraka amin'ny fahatongavan'i Tropico dingana lehibe iray voamarika amin'ity taona ity ho an'ny Android, satria miatrika simulator fananganana premium tena izy izahay. Premium dia fandoavana tokana sy ny atiny rehetra miaraka indray mandeha. Tokony ho velom-pankasitrahana isika fa mahita lalao bebe kokoa tahaka izao amin'ny Android ary manome vola ny mpilalao euro handany kilalao mahavariana.
Un lalao izay misongadina amin'ny lafiny teknika ary izany dia mitondra ny traikefa PC amin'ny findainao. Miomàna amin'ny sary tsara, 3D izay ahafahanao mamindra izany amin'ny fomba fijery tianao ary ahafahanao mandeha an-tongotra mihitsy aza hianatra momba ny fiainan'ny mpiray tanindrazana aminao. Adika amin'ny teny Espaniôla ianao ary ho leo amin'ny filalaovana azy, satria manana herinandro sy herinandro maro ianao handinihana raha ho lasa mpitarika tianao ianao na iray amin'ireo ankahalaina.
Tropico dia iray amin'ireo tonga amin'ny taona ho an'ny Android ary mitondra antsika any amin'ny simulator fananganana izay hamoronana ny tanàna nofinofisintsika. Raha ampidirintsika amin'izany ny zava-drehetra ara-politika sy ara-tsosialy dia miatrika lalao tokana izay novolavolaina ho an'ny rafi-pitantanana finday ankafizinay izahay. Raha manana euro vitsivitsy voatahiry ianao dia aza mangataka andro handany azy ireo amin'ity lalao ity. Tsy handiso fanantenana anao.
Mitovy amin'ny PC
Fananganana sy politika miaraka amin'izay
Votoaty marobe ary iray amin'ireo lalao amin'ny taona
Mety lafo kely angamba
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Tropico dia tonga amin'ny Android mba hahafahanao ho lasa mpitarika nosy Karaiba